चीनले उत्पादन गर्‍यो आफै ‘भाइरस मुक्त’ हुने मास्क ! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Lifestyle/ Health/चीनले उत्पादन गर्‍यो आफै ‘भाइरस मुक्त’ हुने मास्क !
एजेन्सी- चिनियाँ एक कम्पनीले आफै भा`इरस मु`क्त हुने मा`स्कको उत्पादन थालेको छ । कोरोना भाइर`सको संक्र मण फैलिए सँगै चिनि`याँ कम्प`नीले यस्तो मा`स्क उत्पादन थालेको हो ।
कोरोनाको जो`खि`मलाई मध्य`नजर गर्दै चिनियाँ मोबाइल कम्पनी शा`ओमीको स्वामित्व रहेको हुवामीले भाइरस मुक्त मा`स्क निर्माण गरेको हो । अमेजनफिटको यो सेल्फ डिसइ`न्फेक्टिङ्ग मा`स्कको नाम ‘एइ`री’ रहेको छ । यो मा`स्कमा कम्पनीले एक अल्ट्रा भायलेट (यू.भी) लाइट जोडिदिएको छ ।
यसमा विद्युत सप्लाइका लागि एउटा प्लग समेत राखिएको छ । उक्त प्लगमा जोडेको १० मिनेटमा सो मास्क अल्ट्रा भाइलेटको माध्यम` द्वा`रा आफैं सफा हुन्छ ।अल्ट्रा भाइलेट किरणको माध्य`मले मा`स्कको भित्री भाग मात्र सफा हुन्छ । बाहिरी भाग भने स्वयं प्रयोगकर्ताले नै सफा गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।
यसको व्यावसायिक प्रयोग भने केही समय लाग्ने जनाइएको छ । हुवामीका औद्यो“गिक डिजा`इनका उपा`ध्यक्ष पेङ्ग`ताओ यूका अनुसार बजारमा आउन ६ देखि १२ महिना लाग्नेछ ।
विश्वमा कोरोनाको जो`खि`म बढ्दै गएपछि विभि`न्न प्रकार`का मास्क उत्पादन था`लिएको छ । विश्व स्वा`स्थ्य संग`ठनले कोरोनाको संक्र`मण फैलिन नदिन मास्क प्रयोग गर्नुका साथै समय समय`मा हात धुन आग्र`ह गर्दै आएको छ । कोरो`नाको जो`खि`म बढ्दै` गएपछि एन–९५ तथा यो भन्दा पनि गुण स्तरीय मा`स्कको प्रयोग गर्न समेत सुझा`एको छ ।